Zithini iziqhamo zikaMoya oyiNgcwele Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Ziintoni iziqhamo zomoya oyingcwele. NgokwamaGalati 5: 22-23, isiqhamo soMoya luthando, uvuyo, uxolo, ukuzeka kade umsindo, ububele, ukulunga, ukuthembeka, ubulali, nokuzeyisa. Ezi ziziphumo zobomi obukhokelwa nguMoya oyiNgcwele.
Xa umntu esamkela uYesu njengomsindisi wabo, uMoya oyiNgcwele uqala ukuhlala ngaphakathi emntwini. Guqula ubomi bakho. Isiqhamo sikaMoya sisiphumo sokusebenza kukaMoya oyiNgcwele kubomi bekholwa.
1 Kutheni iziqhamo zikaMoya ingezizo iziqhamo zoMoya?
2 Yintoni isiqhamo sikaMoya kubomi bekholwa?
2.1 Ungasiphucula njani isiqhamo sikaMoya kubomi bekholwa?
3 Ziintoni iziqhamo zomoya oyingcwele
3.1 2. Uvuyo
3.2 3. Luxolo
3.3 4. umonde
3.4 5. Ubuhlobo
3.5 6. Ukulunga
3.6 7 Ukunyaniseka
3.7 8. Ubulali
3.8 9. Idomeyini yakho
4 Zithini iziqhamo zenyama
Kutheni iziqhamo zikaMoya ingezizo iziqhamo zoMoya?
Kwincwadi yamaGalati 5: 22-23, umpostile uPawulos usebenzisa igama isiqhamo kwisinye. Ingcinga yokuqala yile Iziphumo zesiqhamo sikaMoya zintle, iimpawu. Ezi zinto zilungileyo kufuneka ziphile kubomi bekholwa, ukuze isiqhamo sigqibe kwaye kubumbane!
Ke sona esoMoya isiqhamo luthando, uvuyo, uxolo, ukuzeka kade umsindo, ububele, ukulunga, intembeko,
ululamo, ukuzeyisa; akukho mthetho uchasene nezinto ezinjalo.
Masicinge isixa seediliya apho eso siqhamo sisiqhamo soMoya kwaye iidiliya zizidalwa ezilungileyo. Ukuba, ngengozi, enye yeziidiliya ibolile, iya kungcolisa lonke iqela.
Ke kubonakala ngathi uPawulos uyacacisa zibaluleke kangakanani izidima, kodwa ikakhulu kubunye kwaye baphile likholwa, ngaloo ndlela bayala imisebenzi yenyama.
Yintoni isiqhamo sikaMoya kubomi bekholwa?
Ngokusisiseko, sinokuthi uyabuchasa ubomi besono kwaye sisiphumo sobukho bukaMoya oyiNgcwele kubomi bekholwa.
Isiqhamo soMoya kubomi bekholwa bubomi noYesu, apho sithobela khona iNkosi kwaye sikwazi ukuhamba noMoya oyiNgcwele.
Xa sinikela ngobomi bethu eNkosini, ngalo mzuzu uMoya oyiNgcwele uqala ukuhlala kuthi kwaye, ngaye kuphela, isiqhamo siveliswa kuthi. Xa esi siqhamo sivelisiwe, sihlala siphila.
Ke ngoko, omnye wemisebenzi yoMoya oyiNgcwele xa eqala ukuhlala kubomi bekholwa, ngu qala ukumguqula umntu nakuMoya oyiNgcwele kuphela onako Sincede siphumelele umlo wenyama yethu.
Ungasiphucula njani isiqhamo sikaMoya kubomi bekholwa?
Kufuneka sinikele ngobomi bethu kuYesu, "ukuzalwa ngokutsha"Kwaye siya kwamkela uMoya oyiNgcwele ke ihlala kuthi. Kuba uMoya oyiNgcwele uhlala kuthi, uqala ukusebenza ukusinceda ukuba silwe nemisebenzi yenyama (ukukrexeza, uhenyuzo, ukungahlambuluki, inkanuko, unqulo-zithixo, ukukhafula, ingqumbo, iinkolelo, umona, ubunxila, ubudlakudla). Ukukhumbula ukuba abo benza izinto ezinjalo abayi kubudla ilifa uBukumkani bukaThixo.
Ke ngoko yi silwe nendalo yethu yobuntu, kodwa kuphela ngoncedo lukaMoya oyiNgcwele apho siya kuba nakho ukuphuhlisa ubuhle besiqhamo sikaMoya ukusoyisa, ke ngoko, ukuba siphila kuMoya, nathi siya kuhamba ngoMoya.
Uluhlu kumaGalati sisishwankathelo sezona ziphumo ziphambili zobomi kunye noKristu, ubuhle beziqhamo zoMoya:
UThixo uluthando kwaye nabani na onaye unothando. Yeyona nto iphambili kwisiqhamo sikaMoya. Ngapha koko, ngowona myalelo mkhulu weBhayibhile: "Thanda uThixo ngaphezu kweento zonke, nommelwane wakho njengawe siqu" (UMateyu 22: 36-39).
KwabaseRoma 5: 5 siyayibona loo nto uthando lwagalelwa ezintliziyweni zethu ngoMoya oyiNgcwele. Luthando olungenamiqathango, ekufuneka lusetyenziselwe ukuthanda bonke, ngaphandle kokwahlulahlula. Uthando sisimo sengqondo kwaye awuva.
kwaye ithemba alidanisi; ngokuba uthando lukaThixo luthululelwe ezintliziyweni zethu nguMoya oyiNgcwele, esamnikwayo;
AmaRoma 5: 5
KuYesu sinaye ulonwabo lwenene kuba sinethemba kwaye siyazi ukuba sisindisiwe. KuThixo, usizi linyathelo nje, uvuyo luhlala lubuya.
Uvuyo alufani nolonwabo! Ukonwaba kunxulunyaniswa neemeko, yiyo loo nto kukhawuleza kudlule. Uvuyo luhlala lukhona kumaxesha alusizi, kuba ngeembandezelo kunye neembandezelo esihamba kuzo, sifumana amandla okuphucula uvuyo lokwenene.
Ke ngoko, uvuyo aluxhomekekanga kwiimeko.
IBhayibhile ifundisa oko sinoxolo noThixo ngoYesu. UThixo uSomandla ngoku ungumhlobo wethu. Sikwanemfundiso yebhayibhile ethi Olu xolo kufuneka lukhusele iintliziyo zethu nakweyiphi na inkxwaleko okanye uloyiko, nokuba yeyiphi na imeko. Olu xolo, njengesiqhamo sikaMoya, luyinyani kwaye luphelele.
Eyona nkcazo ilungileyo yomonde yile ukuzeka kade umsindoKuba umonde njengesiqhamo sikaMoya ayikokulinda, kodwa amandla okuzingisa nokuhlala uzinzile, nokuba sekunzima.
Iimpawu Qiniseka ukuba loo nto ityaliweyo iya kuvunwa ngexesha elifanelekileyo. Ukuzeka kade umsindo (umonde) kusenza siwulungise umhlaba kwaye sityale imbewu ngelixa silinde imvula.
Indlela esibaphatha ngayo abantu iyatshintsha kuba sibona ixabiso labo kuThixo. Ukuba nobubele okanye ukubonisa ububele yimfesane, inceba, nokuba nesisa kwabanye.
Kuxa sibeka enye kuqala, yiyo loo nto silahla u "I" wethu. Inxulumene nothando, ngoko siyacetyiswa ukuba sibonise ububele. Ke ngoko, kuthetha ukuba akufuneki sibangele iintlungu kuye nabani na.
Ububele benza okuhle, ingekuko ukukholisa abantu, kodwa ukwenza okulungileyo nokufanelekileyo. Ukulunga kuveliswe ngaphakathi kuthi nguMoya oyiNgcwele kwaye kusenza sikwazi ukujonga inyani kwaye ilungile. Ke ngoko, kusikhokelela ekubeni sigatye yonke into enxulumene nobubi nobungendawo.
Oko sikubona kakhulu kwihlabathi lethu ukuthembeka, olu luhlobo lobudlelwane "beemeko" ezihlala zixhomekeke kwinqanaba lolwalamano, kunye nakwindlela yokuziphatha yomnye umntu.
Xa kukho urhano lokuba omnye umntu akasathembekanga, ukunyaniseka kuthatha umva.
Ukuthembeka, njengesiqhamo sikaMoya, kunjalo thembeka komnye umntu, ngaphandle kwembuyekezo, ibonisa ukuthembeka kukaThixo. INkosi ihlala ithembekile, nokuba asithembekanga.
Ke ngoko, olona vavanyo lukhulu apho ukuthembeka kukhula ebomini bethu kuxa sihlala sithembekile eNkosini, hayi ngenxa yento ayenzayo okanye angasenzela yona, kodwa ngenxa yokuba enguYe.
Ubulali ngu ukubanakho ukuzola kwaye wenze nokuzola nakwimeko ezingathandekiyo. Indawo ebonakalisayo yobulali, njengesiqhamo sikaMoya, kukuvumela ukuba ukhokelwe nguThixo, njengegusha ikhokelwa ngumalusi.
Ubulali kufuneka buqale bukhule kubudlelwane bethu neNkosi kwaye ke buza kubonakala ekuziphatheni kwethu nabanye.
9. Idomeyini yakho
El Ukuzilawula, ngokwentsingiselo yeli gama, ichaza ubuchule bomntu bokuzigcina, kuba enye yezona ngxaki zinkulu abantu abanazo zichasene neminqweno yabo. Xa kungekho kuzibamba, ezinye izinto ziyenzeka, umzekelo, ukumka kwinjongo yeNkosi.
Nangona kunjalo, ngoncedo lukaMoya oyiNgcwele, kunokwenzeka ukuba sikwazi ukuzilawula kwaye sizigcine, kwaye oku kuyasivumela ukuba sazi indlela yokwenza xa umzuzu ulungile, uyakusivumela ukuba silinde xa kufanelekile ukulinda .
Zithini iziqhamo zenyama
Isiqhamo sikaMoya sichasene nesiqhamo senyama (ubomi besono). Uthi isiqhamo senyama sithi: ukurheletya, ukungcola, uburheletyo, ukukhonza izithixo, ukukhafula, intiyo, ukungavisisani, umona, umsindo, ukuzingca, imbambano, amaqela, umona, ubunxila, iindywala, nezinto ezinje.
Ke ngoko, masikukhumbule oko ovelisa isiqhamo kunye nokulunga kwaso nguMoya oyiNgcwelekodwa ukuba kwenzeka ngokukhawuleza kangakanani na kuthi.
Siza kukhulisa kuphela isiqhamo sikaMoya ngokukhawuleza ngakumbi xa ukuthobela kwethu iNkosi kusanda, ke ubomi bethu buya kuba njalo iguqulwe ngokupheleleyo kwaye ngokuqinisekileyo iya kuba nefuthe kwabanye ukuba balandele indlela efanayo.